Royal National Hotel, any London | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | zavatra ilaina, Londres
Iray amin'ireo tanàna cosmopolitan indrindra any Eropa sy izao tontolo izao ny London, noho izany ny tolotra hotely dia tena marobe sy isan-karazany. Fa rehefa izao no zava-misy, matetika ny mpandeha dia matetika no manontany hoe: aiza no hamandrihako? Hotely iza no tsara nefa tsy dia lafo? Ity misy hotely kintana telo any London, ny Hotel Royal National London.
Hôtely tsy manam-paharoa sy falifaly izy miaraka amina fifandraisana tena tsara amin'ny seranam-piaramanidina Heathrow. Manampia bar, cafeteria ary na toerana iray manokana momba ny pizza aza. Ary ahoana?
2 Inona no ho hita eo akaikin'ny hotely
Ity hotely ity dia kintana sokajy telo ary izy dia ao amin'ny iray amin'ireo faritra afovoan'ny renivohitra anglisy. Nisokatra tamin'ny 1967 ary miasa ao amin'ny tranobe misy endrika Sinoa misy fito izy, na dia mifanaraka amin'ny vanim-potoana maoderina aza naverina tamin'ny 2005 tanteraka.
Any Bedford Way no misy azy, manodidina ny 25 minitra an-tongotra avy eo Bloomsbury ary maharitra 20 minitra amin'ny fiara vao mankany amin'ny Victoria Park. Eo akaikin'ny tobin'ny fantsona Tottenham Court Road. Tsy misy ratsy. 500 metatra miala ny British Museum ihany koa ary 350 metatra miala ny University of London fotsiny, ohatra.
Mikasika ny tombontsoa fototra manolotra antsika a fivarotana kafe, fivarotana fivarotana ary fivarotana fanomezana, mpanao volo, Internet maimaim-poana, Internet WiFi, toeram-piantsonana misy karama ary efitrano tsy fifohana sigara. Rehefa mamaky bebe kokoa aho dia hitako fa toy ny any Angletera dia tsy misy andro mafana loatra dia tsy misy ny fividianana rivotra ao amin'ny efitrano fandriana, na dia misy aza ireo faritra iraisana. Roa taona lasa izay dia nisy onja hafanana ary nisy namana iray nijaly tamin'io fahazarana io, saingy hey, raha tsy mandeha eo afovoan'ny fahavaratra ianao dia ho afa-mandositra ny hafanana ...
Amin'ny lafiny efitrano dia misy efitrano fototra misy farafara roa na fandriana roa, miaraka amin'ny WiFi, terras, faritra hipetrahana, efitra fandroana iraisana sy fantsona; ary efitrano tsotra misy fandriana roa ho an'ny fampiasana tokana. Misy ihany koa ny efitrano telo. Ny efi-trano rehetra dia misy hafanana afovoany, fahitalavitra sy lafaoro misy mikraoba, fotodrafitrasa fanaovana dite / kafe ary barika. Mazava ho azy, raha tsy tianao ny mizara ny trano fidiovana, andramo tadidio izany rehefa mamandrika.
Manolotra ny Royal National Hotel London Sakafo maraina: voamadinika, voankazo, mofo, toast, kafe, dite, fa afaka mandoa vola fanampiny ianao ary mankafy mahazatra Sakafo maraina anglisy izay feno kokoa sy tsy manam-paharoa. Eritrereto ny atody, holatra, saosisy ra, voatabia na tsaramaso bakes… ary tsy mandoa vola bebe kokoa ianao satria raha mankany amin'ny cafeteria eny an-dalambe ianao dia azo antoka fa avo kokoa ny vidiny.
Izy io koa dia manana faritra fisakafoanana ivelany izay ahafahanao misakafo, fisotroana ary trano fisakafoanana izay manolotra sakafo sinoa matetika. Izy io koa dia manana dobo filomanosana, sauna, jacuzzi, gym ary solarium. Miasa 24 ora ny fandraisana, misy fotodrafitrasa hifindra amin'ny seza misy kodiarana ary raha iray amin'ireo izay mandeha miaraka amin'ny biby fiompy ianao, raha tsy ataonao amin'ny alika goavambe dia tsy misy olana.
Raha tsy izany dia izao hotely teti-bola any London Manolotra amin'ny ankapobeny izay atolotry ny hotely hafa: fanadiovana maina, fanofana solosaina, fifanakalozam-bola, ivon-toeram-pandraharahana ary serivisy amin'ny efitrano. Ny fidirana dia manomboka amin'ny 2 ora ka hatramin'ny misasakalina, ary amin'ny 12 maraina ny fizahana.
Liana amin'ny tahan'ny, farafaharatsiny mba hahazoana hevitra? Mitady izay nisafidianako daty tamin'ny herinandro sy talohan'izay dimy alina ny efitrano roa misy ny sakafo maraina misy vidiny 594 euro ho an'ny olon-dehibe roa. Miaraka am-pandriana tokana roa sy sakafo maraina dia miakatra hatramin'ny 732 euro ny vidiny ary miaraka amina serivisy antsasak'adiny (ho an'ny olona roa foana, dimy alina), 871 euro. Mitentina 997 euro ny efitrano telo.
Manaiky ny Mastercard, Visa ary PayPal ho toy ny karazana fandoavana ny trano fandraisam-bahiny. Hevitra? Eny, misy ny zava-drehetra. Aza manantena fahagagana, angamba misy fanontaniana momba ny fanadiovana na fampiononana ny ondana, fa efa fantatsika hoe ahoana izany, isika rehetra miresaka momba ny ataontsika amin'ny foara ...
Inona no ho hita eo akaikin'ny hotely
Araka ny voalazantsika tetsy ambony Manana toerana tena tsara ny hotely satria saika ny Londres afovoany. Raha ny marina dia heveriko fa io no tsara indrindra omena azy. Raha tsy mitady rendrarendra be na hotely fivarotana bizina mahafatifaty ianao fa misy zavatra mandeha ary misy azy tsara dia safidy tsara io.
Afaka mandeha an-tongotra na mitondra fitateram-bahoaka ianao ary tonga amin'izay tianao. Tena akaiky ny British Museum, iray amin'ireo malaza indrindra eran'izao tontolo izao ary miaraka amin'ny iray amin'ireo fanangonana tsara indrindra, indrindra amin'ny lafiny Egypt Egypt, nefa manana zavatra avy any Gresy, Roma, Afovoany Atsinanana na Amerika. Tena mahafinaritra ny fanangonana nataony. Ny tanjona dia ny manokana andro iray manontolo ho an'ny fitsidihana, ka ny fanakaikezana dia avo roa heny.
Azonao atao ny manararaotra ny zava-misy fa eo akaiky eo ny hotely ary misy mpitari-dalana amin'ny teny espaniola. Misokatra amin'ny 10 maraina ny tranombakoka ary mikatona amin'ny 5 ora sy sasany hariva, noho izany dia mety ho iray amin'ireo toerana voalohany jerena izy. Etsy ankilany dia Oxford Street, iray amin'ireo làlana mahafinaritra indrindra sy ara-barotra any Angletera, miaraka amin'ny Fivarotana an-jatony manaraka ny 200 metatra avy amin'ny Marble Arch mankany Oxford Circus. Rehefa mandehandeha ianao dia mieritrereta fa ny niandohany dia ny an'ny lalana romana ary io no iray amin'ireo fidirana mankamin'ny tanànan'i London taloha.
Eto izy io, ao amin'ny Oxford Street, toerana misy ireo magazay malaza indrindra toa an'i Uniqlo, H&M, Benetton, Zara, Adidas, Mango na Topshop, mba hanomezana anarana fotsiny ireo marika iraisam-pirenena. Topshop dia manana fivarotana super 800 metatra toradroa eto, ohatra.
Tsotra araka ny hitanao, ity hotely ity: toeram-ponenana kintana telo tsy lafo ary tombony lehibe no toerana misy azy. Raha tsy dia be fisalasalana momba ny trano fandraisam-bahiny na ny teti-bolanao ianao dia manery anao hanao fanitsiana, mendrika ity toerana ity noho ny toerana mahafinaritra azy, eo amin'ny Bedford Way - Russell Square.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Londres » Royal National Hotel, Londres
Ahoana ny fomba hisafidianana masoivoho fizahan-tany